I-Epiphyte B&B - I-Golden Orchid Cottage - I-Airbnb
I-Epiphyte B&B - I-Golden Orchid Cottage
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Matt
I-Epiphyte B & B iyindlu eyingqayizivele ehlala endaweni yemvelo emahlathini emvula aseDaintree World Heritage, amahora ama-2 enyakatho yeCairns eduze naseCape Tribulation. Ihlezi phezu kwegquma elincane futhi inokubukwa okumangalisayo ngaphesheya kwehlathi ukuya e-Thornton Peak kanye ne-Alexandra Range, I-Epiphyte iqhele ngamaminithi ambalwa ukusuka emabhishi anokuthula, imigwaqo yokuhamba ngezinyawo kanye nezikhungo zezivakashi futhi iseduze (kodwa kuthule kakhulu kune) hub yezokuvakasha e-Cape Tribulation. Inezindawo zokuphumula ezivulekile zezivakashi namaveranda, ukubukwa okumangazayo kanye namakamelo aphindwe kabili e-en-suite anovulandi wangasese, i-Epiphyte iyindawo efanelekile yabantu abangashadile, imibhangqwana noma imindeni/amaqembu. Nethezeka, wehlise umoya, vakashela amabhishi ethu amangalisayo nemigodi yamanzi, uzwe ihlathi lemvula laseDaintree elinomlingo nezitshalo eziqhakazayo ezindala kunazo zonke emhlabeni. Kunamakamelo ama-4 endlini enkulu; I-1 single, 1 double & 2 amagumbi aphezulu aphindwe kabili / omndeni kanye nekhabhini yangasese engu-50 m ukusuka endlini enkulu.
Izilinganiso zamagumbi zisuka ku-$80/ngokukodwa noma ku-$130 - $150/kabili. I-Golden Orchid Retreat (ikhabhini) ngu- $170/ubusuku. Izintengo zifaka ibhulakufesi elimnandi letropikhi kanye netiye/ikhofi noma nini. Futhi singakweluleka mayelana nokubhukha lonke uhambo nemisebenzi. Uma uzozitholela, uhlole, uqonde, ubonge noma ukhululeke nje uhambe - sibheke ngabomvu ukwabelana nawe ngesiqephu sethu esincane sePharadesi. 'Siyakwamukela Ekhaya' ku-Epiphyte B & B.
4.92 · 129 okushiwo abanye
I-Daintree iwuhlobo lwePharadesi - amahlathi emvula aphansi angakathintwa, imifudlana yamahlathi emvula ahlanzekile namabhishi amagugu omhlaba. Ulwandle, izintaba, ulwandle, izilwane zasendle, ihlathi - kuyamangalisa ukuhlola kodwa futhi akukho ndawo enokuthula ukuze uphumule!
Ngikujabulela kakhulu ukuhlangana nabantu abasha futhi izindawo zokudlela nezindawo zokuphumula ezinkulu okwabelwana ngazo namaveranda avulekile alungele ukuhlangana nezinye izivakashi.